Nahoana no mandalo ady ny mpino ?
Fa ahoana no mandalo ady ny mpino
Romana 8:28 « Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. »
Fa nahoana no mandalo ady ny fiainan’ny mpino ?
Io Tenin’Andriamanitra eo ambony io dia efa karazan’ny mamaly izany fanontaniana izany ihany.
Mazava tsara ny adiresy hiantefan’io Tenin’Andriamanitra io « dia izay voantso araky ny fikasany rahateo.»
* Tsy ilay voantso :
- araky ny eritreritry ny olona,
- araky ny fandaminana ety ambonin’ny tany,
- handingana ireo karazana rafitra na eo amin’ny fitondrana ety ivelany na ao anaty sehatry ny fiangonana.
* Fa Voantso araka ny fikasan’Andriamanitra :
- ny « mpino » ambara eo amin’io lohan-teny io dia « ilay voantso araky ny fikasan’Andriamanitra » : « kristianina » na “mpino”
Ilay hoe « voantso » no matetika tsy azon’ny olona.
Taiza moa no tena niandohan’ity atao hoe « fiangonana » ity?
Raha jerena ny teny fototra grika “Fiangonana” = « eklesia », na hoe « ekles »,
- ny dikan’ny hoe « ek » dia « voantso », izany hoe “nandre feo”;
- ny « kles » dia hoe « miala » ;
Izany hoe ny atao hoe “Fiangonana” izany dia « nandre feo dia niala ».
Ary izay no ambarany eto satria nanomboka tany amin’ny Eksodosy tany Andriamanitra, rehefa hiteny amin’ireo zanak’Israely ireo Izy tamin’ny alalàn’i Abrahama sy ry Mosesy (…), dia izao no ambarany hoe : « lazao amin’ny fiangonana hoe: ».
Iza ireo fiangonana ireo ?
Tsy ilay misy tilikambo na ilay trano no tian’Andriamanitra hivantan’io teny io fa ilay olona, ireo zanak’Israely.
- Ankehitriny ny teny fikasan’Andriamanitra dia izao, ny olona tsirairay avy no atao hoe fiangonana, rehefa nandre antso.
Rehefa nandre ny Tenin’ Andriamanitra na ny Filazantsara ny olona iray, ka nanaiky izay Teny izay, dia izay vao atao hoe lasa fiangonana Izy.
Inona ary ilay antso ?
* Tantaran’i Apostoly Paoly : Asan’ny Apostoly 9
Saoly dia nandre antso avy any an-danitra tany nanao hoe « ry Saoly, ry Saoly, ry Saoly… » Antso reny io.
Asa 9 :3-4 “ Ary raha nadeha izy, dia tonga teo akaikin’i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy; dia lavo tamin’ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana hianao no manenjika Ahy?”
Ary hoy izy : « fa Iza moa ianao, izany miantso ahy izany ? »
Asa 9:5 “Ary hoy izy: iza moa hianao , Tompoko? Dia hoy Izy: Izaho no Jesosy Izay enjehinao;”
Andriamanitra namaly mazava tsara ilay antso hoe : «Izaho no Jesosy» Izy ilay Filazantsara.
Ary izay ilay ambarany aty amin’ny Epistily aty manao hoe : Efesiana 1:13 « Ao aminy koa ianareo, rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo, eny, ao aminy koa ianareo, rehefa nino, no nasiana tombo-kase tamin'ny Fanahy Masina araka ny teny fikasana. »
Rehefa re, izay anie no nahatonga an’ Andriamanitra niteny tamin’ireo fiangonana fito tao Asia Minora e, miteny matetika mihintsy Andriamanitra manao hoe : « izay manan-tsofina ho entina mihaino, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy aminy. »
- ny ankamaroan’ny olona dia manan-tsofina fa tsy mandre, tsy mba gaga amin’izany ve ianao ?
- na ny tena marimarina kokoa, tsy mety mandray ilay Filazantsara hiditra ao anatiny ny olona fa izao, henony fotsiny, ohatra ireny:
- mandre feon-gazety ireny izy,
- mandre « radio » ireny fotsiny izy…
Ary ity no tena zava-mahatahotra, fa ny toetran’ny olona na ny fomban’ny olona eo amin’ny fiainany andavan’andro, dia arakaraky izay zavatra raisiny ihany na renesiny.
- Raha filazantsara no tena mitsofoka ao anatin’ny fon’ny olona, dia lasa tsara ny fiainany; arakaraky izay zavatra miditra ao ihany no fiainany,
- Fa raha toa ka filazana ratsy no miditra anaty ny fon’ny olona dia ratsy ny fiainany.
Ny zava-misy :
- Inona moa no ataon’ny olona ao am-piangonana ao ?
Tsy mandre ny Tenin’Andriamanitra ve ? Mandre Tenin’Andriamanitra no be dia be.
- Kanefa mahagaga fa ratsy ny toetra ny olona.
Ny antony : Miankina amin’ilay olona miteny:
Mety mandre ny filazantsara ihany ny olona, mety mandre ny Tenin’Andriamanitra ny olona.
Ka na dia mandre tenin’ Andriamanitra aza ny olona, kanefa ilay fantsona maloto dia izay zavatra avy ao amin’ilay fantsona ihany no tonga any amin’ny olona mihaino.
Ohatra: ilay mpitory filazantsara mpijangajanga,na dia manambara an’i Jesosy aza izy dia:
- tsy ilay Jesosy tena Filazantsara no mitsofoka ao amin’ny olona,
- fa ilay fanahin’ny fijangajangana.
Ary aza gaga ianao raha mitombo ny mpijangajanga, ny mpandainga, ny mpihatsaravelatsihy, ny mpangalatra (…) eto Madagasikara, satria ahoana ?
Be dia be ny mpitory ny « filazan-dratsy » na dia ao am-piangonana aza,
Raha ity Tenin’ Andriamanitra ity no jerena,
- ny filazantsara rehefa tena tonga any amin’ny olona, ka mipetraka tsara ny maha mpaminany ny mpaminany iray, tsy maintsy manova olona.
Araka ny nambarako anao, vavolombelon’izany izaho izay mitory ny Tenin’ Andriamanitra aminao.
Fijoroana vavolombelona : Rehefa nipetraka tsara tao amiko ny atao hoe filazantsara, niova aho, nitombo aho, ary mahasahy mitory teny aminao toy izao.
Rehefa tena ny filazantsara tsy misy kilema no ambara amin’ny olona dia manova olona izany.
- mamorona fampianarana ho azy ny olona satria tsy tantiny ny mihaino io Tenin’ Andriamanitra io.
2Timoty 4:3 “ Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan’ny olona ny fampianarana tsy misy kilema; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany.”
- Dia lasa filazan-dratsy no tonga ao amin’ny olona na dia ao am-piangonana ihany aza.
Isaia 4:1 « Ary amin'izany andro izany dia hisy vehivavy fito hihazona lehilahy iray ka hanao hœ: Ny haninay ihany no hohaninay, ary ny lambanay ihany no hotafinay; Fa izao ihany no angatahinay: Aoka hotononina amin'ny anaranao izahay, Ka afaho tondromaso »
Izany hoe : mamorona fampianarana ho azy ireo, ka dia hoe : aleo mba ho tononina amin’ny anaranao ihany ry Jesosy ny fiangonanay.
Fa raha vao atao hoe fiangonan’ny devoly io tsy misy miditra ao.
Fa aza adino, na tsy misy soratra aza eo, mba ampahirato ny maso hoe : lalàna mankaiza no hitarihan’ity olona ity ahy?
Ka noho izany androany, hiresaka isika hoe, mety mandalo ady sarotra tokoa angamba ianao rehefa mivavaka? Rehefa tena mino an’i JESOSY, dia mety mandalo ady sarotra; fa aza kivy ianao.
Fa ny Tenin’Andriamanitra aza manao hoe : Jakoba 1:2 « Ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa, raha iharan'ny fakam-panahy* samy hafa ianareo, [* Na: fizahan-tœtra] »
Te ho sambatra ve ianao? Meteza hiharan’ny fizahan-toetra; Fa te hamoaka anao amin’ny fitahiana mahatretrika Andriamanitra.
Raha misy zavatra mafimafy eo aminao, aza mitsoaka ady..
Salamo 66:12 “Efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay Hianao; nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay; fa nitondra anay nivoaka ho amin’ny fitahiana mahatretrika Hianao.”
Ary izay no horesahantsika eto.
Na inona na inona zavatra mitranga eo aminao, na dia izay eritreretinao fa olana goavana be aza !
Hijery ny tantaran’i Jona isika, ry havana.
Fa maninona no mandalo ady ny mpino? Any amin’ny Petera any aza izy manambara fa « raha enjehin’ny olona noho ny fahamarinana ianao, dia izao, aza taitra, aza gaga fa izao ihany, manamasina an’i KRISTY ho TOMPO ao am-ponao .»
1 Petera 3:15 « Fa manamasìna an i'Kristy ho Tompo ao am-ponareo (Isa. 8.12, 13); Ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana, »
Ary raha mihaino izao ianao, mino aho fa izay no hetahetanao, ary homen’Andriamanitra androany ny vahaolana.
- efa olona nibebaka,
- efa fiangonan’ANDRIAMANITRA
- Izany hoe efa nosoran’Andriamanitra, misy ny atao hoe FANAHY MASINA.
Ho anao izay mbola tsy nibebaka, ka te ho feno ny FANAHY MASIN’ANDRIAMANITRA, dia mitenena hoe : JESOSY ô, midira ato anatiko, mba ho fiangonana aho.
Tranon’ANDRIAMANITRA aho izany satria ato anatiko Izy. Izay ihany, ry havana, no lalàna ahafahanao mandova ny paradisa, ary izay ihany no fanalahidy manafaka an’io vesatra be eo aminao io.
Fahateraham-baovao, lasa olona vaovao ianao, ka na dia firy taonina aza ny olana misy eo amin’ny fiainanao, rehefa ao JESOSY, dia maivana izany satria Teny fikasan’Andriamanitra izany,
Matio 11:28 « Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. »
Marina izany, ry havana, tsy voabaikon’ny rivo-doza io, tsy voabaikon’ny zava-misy ety ambonin’ny tany io.
Fa rehefa ao JESOSY= zavatra omen’Andriamanitra anao dia ny fitsaharana .
Mivantana amin’ny efa mpino izany isika izao, Tenin’Andriamanitra ho an’ny mpino na ny efa kristianina ity teny ity.
Fa maninona no mandalo ady, na olana ny mpino ?
Jona 1:1-3 « [Ny nanirahan'Andriamanitra an'i Jona hankany Ninive, sy ny nandosirany, ary ny nanjo azy noho izany] Ary tonga tamin'i Jona, zanak'i Amitahy, ny tenin'i Jehovah nanao hœ: « Mitsangàna, mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary miantsoa ny amin'ny hamelezana azy, fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. « Nefa Jona nitsangana handositra ho any Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah; ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo hankany Tarsisy, dia nandoa ny karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha tamin'ny tao ho any Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. »
1- Sao dia niala tamin’ny lalàna ianao.
- Toerana nanirahana an’i Jona = Ninive
- Toerana nalehan’i Jona : Tarsisy.
Ny vokany: tonga ny fahoriana sy ny rivo-doza.
Jereo sy diniho tsara, maninona ny mpino no mandalo rivo-doza ? na mandalo ady ?
- Sao dia niala tamin’ny lalàna ianao.
- Sao dia adinonao ny nifidianan’Andriamanitra anao
Ny Tompo dia nilaza ao amin’ny Jaona 15:16 « Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. »
Teny fikasana izany, izay no nifidianan’i Jesosy anao.
Raha novonjen’Andriamanitra aho :
- voasoratra ao amin’ny bokin’ny fiainana ny anarako.
- Lasa miaramilan’Andriamanitra aho,
Inona no tena ilain’ Andriamanitra ahy? Ho mpiara-miasa Aminy : andeha sy hamoa.
Jereo ny nataon’i Jona teto, nivily lalàna izy, tsy nandeha any amin’izay anirahana azy izy, koa aza gaga ianao raha tonga teny amin’i Jona ho any Tarsisy ny rivo-doza.
Ary ny tena zava-doza dia izao, tsy Jona irery no tratran’ny loza, fa izay niaraka taminy rehetra dia tratra daholo.
Maninona no tratra ny loza ? Maninona no misy ady eo amin’ny fiainanao ?
- Tsotra ihany, tian’ Andriamanitra ianao mba hiaiky ny fahadisoanao:
satria tsy mandeha amin’ny lalàna izay nofidianan’ Andriamanitra alehanao ianao.
- Ary tsy miverina amin’ny laoniny, tsy miverina amin’ny fiadanana ianao raha tsy miaiky ny fahadisoana.
Ny tokony hatao : Tian’Andriamanitra hiaiky ny fahotany isika.
1Jaona 1:9 « Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra. »
Ny antoka omen’ Andriamanitra anao dia mahatoky sy marina Andriamanitra. Andriamanitra, ry havana, no miteny izany.
Manomboka androany, ry havana, :
- Inona no zavatra misafotofoto eo aminao ? Teny tsotra ihany : miverena !
- Inona no antony ? Maneke ny fahadisoanao, sao dia efa nivily ianao. Ekeo izay dia miverena !
Apokalypsy 2:5 « Koa tsarovy izay nitœranao fony tsy mbola lavo, dia mibebaha, ka manaova ny asa voalohany; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao Aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitœrany, raha tsy mibebaka ianao. »
Ny « asa voalohany » notenenina an’i Jona dia izao : « mandehana ianao, mankany Ninive, mitory ny filazantsara. »
Ny « asa voalohany » nifidianan’ANDRIAMANITRA anao, tsy ny ho vonjena ho eo amin’ny bokin’ny fiainana ihany, ka handova ny paradisa, fa hoy ny Tompo : « Handeha sy hamoa. »
Mety efa ela be angamba ny taona niainanao, nandraisanao an’i JESOSY; nefa ianao variana fotsiny mipetraka teo ambony birao, variana fotsiny ianao, mihamikamina any an-trano any, amin’izao vanim-potoana hita fa efa maha-akaiky ny fihavian’ny Tompo izao. Be dia be ny mahavariana anao.
- Aza gaga ianao raha misy zavatra mafimafy ao.
- Miverena ry havana, hoy ny Tompo hoe : « miverena amin’ny fitiavana voalohany. »
Inona no fitiavana voalohany ?
Jesosy mamonjy ny olona ho afaka amin’ny fahotana . Tahaka ny namonjen’ny Tompo anao, no hanirahan’ny Tompo anao hitory ny fibebahana eny amin’ny olona.
Tian’Andriamanitra Jona mba hihaiky ny fahotany.
Jona 1:12« Ary hoy izy tamin'ireo: Betao aho, ka atsipazo any anatin'ny ranomasina hahatony ny ranomasina aminareo; fa fantatro fa noho ny amiko no mahatonga izao onja mahery izao aminareo. »
Izany no tena mpino « champion », ny olona manaiky heloka, miaiky ny fahotany.
2.- Te hanaporofo Andriamanitra fa eo aminao foana IZY.
Na dia mivily tsy ankany Ninive aza ianao, dia hoy JESOSY ao amin’ny Hebreo 13:5 « Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny tœ-tsainareo, fa mianina amin'izay anananareo; fa hoy Izy: "Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory" (Josoa. 1.5). »
- Andriamanitra dia manana hevitra hiheverana antsika
Jona 2:1 « [Ny namonjena an'i Jona, sy ny vavaka aman-tsaotra nataony] Ary Jehovah nanomana hazandrano lehibe hitelina an'i Jona. Ary Jona dia tao an-kibon'ilay hazandrano hateloan'andro sy hateloan'alina. »
Raha ny fijerin’ny olombelona dia tokony ho faty Jona raha natsipy tany anaty ranomasina.
Fa tsy hevitr’Andriamanitra izany, izay ilay Romana 8:28 . Manana ny hevitra niheverana an’i Jona Andriamanitra, ary tsy nandao an’i Jona Andriamanitra.
Jeremia 29:11 “Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ ny farany . »
Ianao koa, tonga eto, raha mandalo fotoan-tsarotra ianao, dia hoy ny Tompo : « tsy handao anao mihintsy AHO, tsy hahafoy anao akory AHO, aza kivy ianao. » Tsy maintsy misy trondro be foana ao nataon’Andriamanitra hitaty anao.
- Izao Tenin’Andriamanitra tonga aminao izao no atao hoe trondro be.
Tanàn’Andriamanitra mitaty anao izao manao hoe : « eo aminao foana AHO anie, matoa mbola omeko ny Teniko ianao e ! »
Tsy ho lanin’ny antsantsa ianao, tsy ho voatelina any anaty alon-drano ianao, tsy ho tratran’ny hatsiaka be any ambann’ny rano any ianao dia ho faty, fa asian’ANDRIAMANITRA trondro hitaty anao moramora any.
Izao Tenin’Andriamanitra izao no trondro, ry havana, ary izay no maha sarobidy ny Tenin’Andriamanitra.
Raha mandalo ady sarotra ianao dia :
- aza mitsoaka ny Tenin’Andriamanitra mihintsy.
- mandehana mihaino toriteny, na amin’ny CD io, na amin’ny « radio » io, na amin’ny fotoam-bavaka tahaka izao io,...
Mandehana, aza mitsoaka toriteny mihintsy na dia somary mandratsadratsana aza. Satria trondro be mitaty anao io !
- Dia inona no ataonao rehefa eo anatin’ny trondro be ianao?
Rehefa tonga tao an-kibon’ny trondro be Jona dia inona no nataony tao, nitabataba sa nimonomonona ? Tsia, fa NIVAVAKA izy.
Jona 2:2 « Dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamaniny tao an-kibon'ny hazandrano Jona »
Ny olona rehefa mandre ny Tenin’Andriamanitra na ilay trondro be dia
- torotoro ny fony.
- mandinin-tena izy
Fa tsy lasa fotsiny toy ny hodi-tsokatra latsahan-kavandra ka mipoaka dia mipitika;.fa mba ho toy ny ranon’orana latsaka ao anaty «éponge» ka tonga dia milentika any anatiny any ny rano.
Dia toy izany, ry havana, rehefa mandre ny Tenin’Andriamanitra ny olona, ka tonga eo aminy izany, dia tsy maintsy mitarika vavaka ho anao izany Teny izany .
Raha mamaky an’io Jona 2 :3-11 io ianao, dia ho hitanao fa vavaka nataon’i Jona ireo: Vavaka.
- miaiky heloka,
- milaza ny fahalehibeazan’i JEHOVAH
- milaza ny niantsoan’i JEHOVAH azy,
- manambara ny fitahiana nataon’i JEHOVAH tamin’i Jona ireo.
Salamo 105:2 « Mihirà ho Azy, mankalazà Azy; saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. »
Raha tonga eto ianao, mba tsapanao ve izany fitiavan’Andriamanitra anao izany ?
Raha hivavaka ianao, vavaka inona no tokony hataonao ao an-kibon’ny trondro ?
- vavaka ho an’ny fiainam-panahy, fa tsy vavaka ho an’ny ara-materialy.
- Vavaka fandinihan-tena hoe : « Tompo ô, mifona aminao aho fa nanao hadisoana, inty aho JESOSY ô, efa novonjenao anie aho e, ato anatiko ny Fanahy Masina e ! Na dia aty anatin’ity rano be ity aza aho, maninona no tsy maty tany ambany tany ? » Misy zava-mahagaga anie izany, .
Rehefa tonga ny Tenin’Andriamanitra tahaka izao dia :
- misaotra an’Andriamanitra noho ny fitiavany.
- mivavaka !
Mananà « réflexe » mivavaka amin’Andriamanitra :
- ny amin’ny teny izay ambarany ianao.
- Manoloana anao manokana.
3.- Miverina amin’ny fitiavana voalohany.
Inona no nataon’i Jona rehefa avy nivavaka izy? niverina tao aminy ny hery. Hoy izy : « handeha aho hiverina amin’ilay niantsonao ahy. »
Jona 3:3 « Dia nitsangana Jona ka nankany Ninive araka ny tenin'i Jehovah. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra, dia lalana hateloana. »
- Rehefa miverina ny herinao, miverina amin’ilay nanirahan’ny Tompo anao
Rehefa avy mivavaka ny olona ka miverina ny heriny, ny zavatra ataony dia ny « handehahitory ny filazantsara. »
Fa tsy lasa indray ianao, hitsangatsangana any Andoharanofotsy na any Ambatomirahavavy, na handeha ho aiza, tsy fantatro! Tsy izany mihintsy.
Rehefa miverina ny herinao, miverina amin’ilay nanirahan’ny Tompo anao. « Tsy ianao no nifidy AHY ry( ....), fa IZAHO no nifidy anao ry (...), ka nanendry anao mba handeha sy hamoa. »
Ny vokany, ilay mahafinaritra be:
- mba homen’i JESOSY anao izay ilainao,
- Ny antsika dia any amin’ilay farany any foana, « omeo aho Tompo ô, omeo aho ».
- Ianao anefa tsy manao ilay iraka voalohany.
- Tsy mety izany, hitondra anao mankany amin’ny loza izany.
Tsy variana fotsiny ianao, omeo vola be aho, hipoaka be any e, omeo ahy ny « 4x4 » hipoaka be, omeo ahy izao…hitera-doza ho anao izany; fa miverena amin’ny « procédure normale » dia ilay fitiavana voalohany, mitory ny filazantsara.
Fa hoy ny Tompo Matio 6:33 « Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » Izay no sitrapon’ANDRIAMANITRA.
Tsy ilaina voizina akory izany « mipoaka be ara-bola » izany, fa mandeha ho azy izany. Tonga ho azy ao aoriana ao izany. Ary hahatonga anao ho tafita any amin’ny paradisa.
- Aza mampifototra mihintsy ny Tenin’Andriamanitra tahaka ny fanaon’ny devoly.
ANDRIAMANITRA, ry havana, tsy mampifototra ny teniny; fa ny devoly no mampifototra. Koa ahirato ny maso.
Maninona no mandalo ady sarotra ny mpino iray ?
Tian’Andriamanitra hipetraka tsara amin’ilay « d’origine » ianao, nofidian’Andriamanitra ianao, manam-boninahitra ianao, malalan’ Andriamanitra ianao.
Hanao inona aho izany rehefa jeneralin’Andriamanitra ?
Handeha hiady, haka ny olona izay mbola any am-pelan-tanàn’ny devoly, hifindra mankany amin’i Jesosy. Izany no jeneralin’ Andriamanitra izany !
Ny olona moa ety ambonin’ny tany dia miady galona ; « général de division, général de corps d’armée… »
Fa izao, tsy voaisanao intsony ireo kintana eo amiko io. Ahoana hoy ny Tompo ao amin’ny Daniela 12:3 « Ary izay hendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra; ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kitana mandrakizay doria. »
Hitanao izany ! Isao anie izany raha voaisanao e ! Saingy tsy mipetraka amin’izay ny olona fa zavatra hafa no ataony.
4- Te haneho ny voninahiny amin’ny alàlanao Andriamanitra
Aza mieritreritra ianao hoe « inona koa no dikan’izay izaho kely ity » Tsia ry havana.
- tsy mijery ny ety ivelany.
- Fa mijery ny « départ » ao anatinao ao Izy.
Mijery ny ao anaty hoe « izaho Tompo ô, ny antony hahavelomako dia IANAO. ». Tsy fombafomba fotsiny ety ivelany.
Rehefa eny am-pandehanana ianao dia hohita eny foana na tsara “départ” ianao na tsia.
Matio 12:34 « Ry taranaky ny menarana! hataonareo, izay ratsy fanahy, ahoana no fahay miteny zavatra tsara? Fa avy amin'ny haben'ny ao am-po no itenenan'ny vava. »
Ohabolana 27:21 « Ny memy ho an'ny volafotsy, Ny fandrendrehana ho an'ny volamena, Ary ny tœtry ny olona dia tsy maintsy ho araka izay zavatra derainy. »
Koa raha tena ilay irak’Andriamanitra no tena lehibe eo aminao, dia tsy maintsy ho hita eny amin’ny fiainanao andavan’andro izany, na amin’ny endrika inona izany, na amin’ny fomba inona izany.
Indraindray ny olona manao hoe : « ka izahay mpiasa, dia hataonay ahoana no ho fitory ny filazantsara amin’ny mpampiasa ? »
Ny tena tanjon’ny fikambanana GBPE dia ny ho vavolombelona ao amin’ny toeram-piasana, mampibebaka olona. Dia hoy ianao : « ka izaho efa retraite koa, izaho angaha afaka haninona ? » Diso ianao, ry havana, fa te haneho ny voninahiny aminao Andriamanitra.
- Ento am-bavaka ny asa mba ho filazantsara velona ny mpiasa
- Ny olona miasa no mijoro ho vavolombelona,
- fa ianao, mety ho efa retraite ianao, mitondra am-bavaka ireo mpiasa
Koa raha misy resy lahatra amin’ny fitondran-tenan’ilay anabavy iray noho ny vavaka nataonao, tsy ho faly ve ianao fa voninahitr’Andriamanitra izay !
- Isika mianakavy ireto dia tsy mitovy, fa misy koa ny sasany mety ho amin’ny alàlan’ny fanomezana vola, mibebaka ny olona.
Dia hoy ianao : « ka izaho tsy mpiasa, izaho tsy mahay miteny. ». Fa ianao koa manana omena. Tsy afaka mankany Moramanga ianao, tsy afaka mankany Toliara ianao, ianao anefa manampy ara-bola; dia tohano ny asa ho an’izay olona afaka mankany.
Fijoroana vavolombelona: manana tanjona roa ity fikambanana ity, ao anatin’ny 5 taona.
1) mitondra ny 25% ny mpiasa mba hibebaka, na hoe mpiasa miova fo ao anatin’ny 5 taona : tantsaha, mpampianatra, mpiasa birao, mpivarotra ...
Nanao « mission » tany Moramanga izahay nanomboka ny talata ka hatramin’ny sabotsy ,mikasika ireo tanjona ireo.
2) mba mitombo miakatra 40% ny fiainam-panahin’ny mpiasa efa mpino.
Rehefa nanaiky aho ny handeha hanao ireo iraka dia marina foana izao Tenin’Andriamanitra izao : « Homba anao AHO. »
Voalohany : nisy ireo olona mibebaka rehefa nambara ny filazantsara ;
Faharoa : mitombo ny fiainam-panahin’ny rahalahy sy ny anabavy rehefa tezaina amin’ny Tenin’Andriamanitra izy ireo.
- Koa raha tsy nandeha aho izao dia nanao ahoana ? Voninahitry ny Tompo izany fa tsy hoe inona akory !
- Ianao koa:
- raha tsy nisy ny vola nomenareo, izaho angaha tonga tany !
- raha tsy nivavaka ho ahy koa ianareo, dia zavatra hafa no noteneniko tany fa tsy ny filazantsara, mety nivilivily,mety lasa nitady vola no nataoko tany.
Fa noho ilay vavaka napetrakareo tsara, noho ilay vola nomenareo, dia izao, afaka nanatratra tsara ilay iraka nampanaovin’Andriamanitra antsika isika.
Te haneho ny voninahiny amintsika ANDRIAMANITRA fa mahaizà miaraka tsara.
Inona no zavatra nitranga rehefa nambaran’i Jona ny filazantsara?
Nanao inona ny olona tao Ninive ? Nibebaka daholo ;
Iza ireo nibebaka? Hatramin’ny mpanjaka ka hatramin’izay farany ambany.
Jona 3:5-6 « Dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fifadian-kanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary nony efa ren'ny mpanjakan'i Ninive izany, dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianany izy, ka nanaisotra ny akanjom-boninahiny, dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenona. »
Noesori’ny mpanjaka ny akanjony, niala teo amin’ny seza fiandrinany izy, nantsoiny avokoa ny vahoaka iray manontolo, hibebaka satria efa niala tamin’i JEHOVAH izy ireo. Dia nihoso-davenona hatramin’ny mpanjaka no midina, nidabodaboka tamin’ny vovoka, porofo fa hiverina amin’ANDRIAMANITRA.
- Rehefa toriana ny filazantsara, ry havana, dia tsy maintsy misy ireo mibebaka, ary izany no voninahitr’Andriamanitra.
Ahoana hoy Jesosy rehefa hanangana an’i Lazarosy tamin’ny maty IZY ?
Hoy IZY : Jaona 11:42 « Raha Izaho, dia fantatro fa mihaino Ahy mandrakariva Hianao; fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinoany fa Hianao no naniraka Ahy. »
- Mba hanehoana ny voninahitr’Andriamanitra eo anatrehan’ireo Jiosy tsy nino ireo
Ny vokany, rehefa nitsangana i Lazarosy, betsaka ny Jiosy no nino.
Izao ihany no ao anatin’ny fon’Andriamanitra, mitondra ny olona mibebaka, izay no voninahiny.
Ilaina ihany ny manana fanana, fa tsy dia izay no voninahitr’Andriamanitra. Indraindray ny an’ny olona, refesiny amin’ny zavatra ety ivelany ny voninahitr’Andriamanitra.
Fa hoy ny Tompo Lioka 12:15 « Ary hoy Izy tamin'ny olona: Mitandrema, ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo; fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahan'ny zavatra ananany. »
Fa ilay harena ato anatiko no tena izy dia ilay harena tsy ananan’ny rehetra : ny famonjena.
- Koa raha te-hahita ny voninahitr’Andriamanitra ianao, ilay olona hibebaka no himasoy.
Koa na dia saika hamely anao aza Andriamanitra ao anatin’izao ady sarotra andalovanao izao, rehefa tena miverina ianao, ka mipetraka sy manaraka tsara ny « procédure » an’Andriamanitra, ny Tompo dia hisintona ny fanapahan-kevitra saika hamelezany anao.
Jona 3:10 « Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny nialany tamin'ny lalan-dratsiny, dia nanenina Izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezany azy, ka tsy nataony izany. »
Na dia nokasain’Andriamanitra haringana aza i Ninive, dia inona no zavatra nitranga ?
- Notsoahin’Andriamanitra ny « décision » ny,
- navelan’Andriamanitra ny heloky Ninive,
- Satria nanaiky i Jona hitory ny filazantsara,
- satria nanaiky ny mponina tao Ninive, hiala amin’ny ratsy fanaony
- satria nanaiky ny mponina tao Ninive hibebaka ka hiverina amin’Andriamanitra.
Dia hoy Andriamanitra : « tsoahiko ny “décision”. »
Ianao koa angamba mety mieritreritra izao hoe :
- tena hofaizin’Andriamanitra mafy angamba aho!
- Misy zavatra mampahory anao lalina ao anaty ao.
- Tena mafy amiko ity Andriamanitra ô !
Fa raha miverina amin’ny « procédure » n’Andriamanitra ianao dia ho tsoahin’Andriamanitra io kapoka mahery aminao io. Satria miverina AMINY amin’ny fonao rehetra ianao.
- Raha mbola tsy ao anatinao Jesosy Kristy, dia miverena amin’Andriamanitra ianao.
Tompo ô, inty aho, zanakao aho manomboka androany aho dia ho iraka solon’i Kristy.
- Ho antsika mpino : meteza ianao hipetraka ka hanao hoe : ho iraka no nifidianan’i Jesosy ahy, ny hitory ny filazantsara.
Koa na dia be aza ny olana eo amiko eo dia
- tsy mitsoaka aho fa amerina ahy amin’ny laoniny IANAO.
- Tsy mitsoaka aho fa eo foana IANAO e !
- Tsy mitsoaka aho mba hanehoanao ny voninahitrao amin’ny alalàko.
Ataovy izay « confession » izay fa ho hitanao fa hiasa amin’ny fiainanao Andriamanitra, hanaisotra ny olana eo aminao Izy.